Yakanakisa mishanu mitambo yekutyaira ye iPhone | IPhone nhau
Kana muri vadikani ve kutyaira mitambo uye iwe unoda kumhanya nhangemutange ne iPhone yako tinokuunzira ongororo iyi nezve Wepamusoro mishanu mitambo yemarudzi maererano App Store kuita kuti vazivikanwe kana usati wasarudza pane chero chazvo. Chaizvoizvo, mitambo yemijaho ye iPhone ndiyo inowanzo kuve neyeakanakisa magirafu uye inopa kumwe kunzwa chaiko, pamusoro pekutyaira kunoitwa ne gyroscope kutsigira zvechigadzirwa zvichaita kuti zviite sezvatiri ichibhururuka mota.
Tichatsanangura iyo mainini kuti isu tinoongorora imwe yeiyi inotevera mitambo zvinoenderana neodha yavo yekurodha pasi uye chiyero muApp Store: Yechokwadi Mujaho 3, Asphalt 8: Airbone, Inoda Yekumhanyisa Vanonyanya Kuda, Colin McRae Rally uye F1 2011 Mutambo.
Iyo yega yezvose vakasununguka kuitira kuti isu tese tigone kunakidzwa, ehe, mutambo 'freemium', ndiko kuti, kana tichida kufamba nekukurumidza isu tichafanira kushandisa mari chaiyo, kunyange hazvo mutambo uchipasiswa pasina kubhadhara. Yavo mifananidzo Pamwe ndivo vakanakisa muApp Store yese uye sarudzo dzemotokari dzinoita mutambo uyu wakagadzirwa neEE wakakosha kune vanoda mitambo yekufananidza, sezvo ichiitwa nemazvo, ichipa kutyaira kwakanaka paunenge uchisimuka uye uchikwikwidza. Uchavandudza mota dzako, kusanganisira mafemu makuru epasirese uye matsva ari kuwedzerwa kuburikidza nezvigadziriso kukwikwidza mumarudzi ese ezviitiko zvakaita seKombe, Imwe ichipesana neiyi, Nguva Kurwisa ... uye zvese izvi bvunzo kupesana neshamwari dzako kubva kuGame Center, Facebook kana nguva ichangopfuura Google+ ine chimiro chinoshanda Nguva Yakachinjiswa Multiplayer iyo inobvumidza kugovana nechero mushandisi pasina chikonzero chekubatanidzwa zvese panguva imwe chete.
Chazvino kwazvose, inowanikwa paApp Store Kubva svondo rino uye yatosvika pachinzvimbo chekutanga chekubhadhara zvikumbiro munyika medu, chikamu chazvino chesaga chakagadzirwa naGameloft, ichivandudza pane avo vakafanotungamira mumifananidzo chaiyo, chirango chekushandisa ndechekuti mutambo Arcade mhando, umo kutyaira chaiko kusingakunde, pachinzvimbo iyo kambani yanga ichida kugadzira mutambo wekupenga uyo watinogona kutora makwikwi kumhanya kwakanyanya kwatinonakidzwa nekukwikwidza, tichishandisa nitrous oxide, tichaita maekisesaizi, inowedzera misere mitsva yekumhanya, iine maseketi munzvimbo dzinozivikanwa seLondon, Tokyo, Nevada, Iceland ... Nedzimotokari kubva kumitambo ine mukurumbira yemitambo yakadai seBugatti, Ferrari kana Zonda. Mutengo weichi chishandiso iri 0,89 € uye kana uchifarira unogona kurodhaunirodha kubva kuApp Store mu link pazasi, ndezve kurova kwechinguva.
Kudiwa Speed ​​Most Ndichitsvagwa
Mumutambo wakagadzirwa neElectronic Arts, saga yemitambo yakabudirira inoenderera mitambo inonyaradza, Inokutendera kuti utyaire masimba emitambo mota unoedza kutiza mapurisa mukumhanyisa-mhanya kumhanyisa kuburikidza nemahombekombe makuru emadhorobha zvakasununguka Iyo mifananidzo Iwo anonongedzera mumhando iyi nekuti ivo havazove nezvakawanda zvekuchiva kune vhezheni yevhidhiyo nyaradzo, kuwana zvakazara kubva pamidziyo yedu zvakajeka. Iwe uchafanirwa kutsvaga hwako hupenyu kuti upedze iwo marudzi uye usigamuchire akawanda kukuvara kumotokari yako, iyo ichave yakanyatsogadziriswa padanho rekufananidzira kwekuenzanisira, nepo ichidzivirira vapikisi, mapurisa kana mota dzinofamba dzakasununguka mumigwagwa nemigwagwa mikuru. Wakave mutambo wakabudirira kwazvo wekutyaira muna2012 uye uchiri kuenderera munzvimbo dzekutanga, nezviuru zvevashandisi pasi rese, pamwe nekutenda kukwidziridzwa kwemutengo iyo kambani yakaparura kurangarira kuvapo kwayo. Parizvino mutengo weichi chishandiso uri 4,49 € pamwe chimwe chinhu chinodhura kuva negore asi nekuda kwehunhu hwemutambo wakavakodzera.
Colin mcrae musangano
Iyo yakasarudzika mutambo we rally iyo ingangoita isu tese takambotamba mairi DreamcastZvakare Codemaster, iyo kambani yakaigadzira, iri mukutarisira kugadzirisa yayo vhezheni yeIOS. Pinda iyi ongororo nekuve iyo yakanyanya kukosheswa yerudzi rwayo, Iyi vhezheni ye idevices inogadzirisazve mifananidzo yayo uye inovandudza, inowedzera maseketi anodarika makumi matatu enzvimbo dzese panopikiswa zvikamu izvi, madhaka, asphalt, tsvina, mavhu…. izvo zvinoshandura hunhu nekubata kwemotokari. Iyo yekudzikira ndeyekuti mota Naivowo zvekare, havazi ivo mukwikwidzi wepasi rose wekumhanyisa urikumhanya parizvino, chinhu chakanaka ndechekuti inosanganisa co-mutyairi nezwi . Mutengo weichi chishandiso iri 2,69 € Uye kana uchida rudzi urwu rwemujaho, iri zita rakakosha kwauri, unogona kurikanda kubva pane inotevera chinongedzo, ndizvo pasi rose yezvinhu zvese zveIOS.
F1 2011 Mutambo
Wekare yemazita ese akaongororwa asi akasarudzika muchikamu chayo, ndiyo mutambo wepamutemo weFormula 1 World Cup, inosanganisira vatyairi vese, zvikwata, maseketi epamutemo kunoitirwa mukwikwidzi wepasirese, zvichikupa iko kunzwa kubva kune yako iPhone yekutyaira mujaho Ferrari sezvinoita Fernando Alonso. Unogona kushandisa iyo Chryry tsime rezita rokutanga kukudzivirira kubva kune vavengi vari kukushungurudza kuti uwane, kukwikwidza muGrand Prix modhi iyo inokupa iwe mukana wekudzidzira kuenderana nedunhu, uchiita makwikwi akakodzera kuyedza kukunda nzvimbo yekutanga pane gridhi uye pakupedzisira mujaho kwaunenge uchafanirwa kupa 110% kuti uikunde uye uwane mapoinzi akakosha kuhwina nyika yevatyairi. Mutengo wemutambo uyu sezvo uri wekare uye uine yakaipisisa mifananidzo yevaya vatinoongorora ndeye 0,89 € sezvo yadonha zvakanyanya, iyi yako link kurodha pasi kubva kuApp Store.
Aya ndiwo mazita mashanu akaongororwa, pamwe akakosha kana iwe uri mudiwa wemitambo yekutyaira, pachezvangu ndinoda kuti vazhinji venyu musarudze Real Racing 5 yeavo. magariro, kubva pakuve wakasununguka mutambo ivo vanoshandisa zvakanyanya pasirese kukwikwidza. Iyewo graphic chimiro sezvo mitambo yakaita saColin McRae uye F1 2011 Game yapfuura yechinyakare uye yaizoda vhezheni itsva muApp Store.
Ndeipi yaungasarudza uye nei?
Mamwe mashoko - Asphalt 8: Airbone yave kuwanikwa paApp Store
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo 5 yakanakisa kutyaira mitambo ye iPhone
Kuenzanisa kwakanaka, maviri ekutanga anoshamisa chaizvo; Ini ndanga ndichifunga nezvekutenga iyo NFS, asi zvinoita senge kwandiri kuti vakawandisa, saka handifunge kuti ndichadaro.
Asi ndokumbirawo uvandudze chiperengo chako ...
Asphalt 8: Airbone uye Inoda Yekumhanyisa Vanonyanya Kuda tora zvisungo zviviri zvekupedzisira, ndinoziva kuti magiraidhi akanaka haasi ese ari mumutambo wakanaka, asi mwari! Asphalt 8 inoshamisa kwazvo, ini ndakaburitsa 7 payanga iri yemahara uye chokwadi ndechekuti magirafu ayo anga akaderera zvakanyanya kupfuura izvozvi uye zvakare achishamisa, asi iyi asphalt nyowani ine zvese, mimhanzi kusarudza kubva, dzakagadzirwa zvakanaka mota uye yakanaka makwara, ehe Unongonakidzwa ne100% yacho kana uine Ipod / iphone 5 kana iphone 4s nekuti ipod 4 inotsigira asi haina kukwana kuti upe ruzivo rwekutamba, kunyangwe ndichifunga kuti iyi edition ndinotora zvishoma mune asphalt nyowani asi zvakadaro yakanaka kwazvo.
Pindura kune 0verlink
Maitiro ekuziva iwo modhi ye iPhone yako uye iPad
Maitiro ekugadzira mavhidhiyo pa Instagram uye Vine senge pro